YEYINTNGE(CANADA): Thursday, January 10
( တရုတ်နိုင်ငံ အခြေစိုက် စစ်ရေး အကဲ ခတ် ဦးအောင်ကျော်ဇော နှင့် ရွှေဟင်္သာ သတင်းဌာနက မေးမြန်း ထားချက် )
10, January 2013 Written by ရွှေဟင်္သာသတင်းဌာန
မြန်မာ အစိုးရဘက်က မြောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းထွန်းနောင်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ (၂၅) ရက်နေ့မှာ လဂျာယန်-လိုင်ဇာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ KIA တပ်တွေ ဒီလမ်းကြောင်းကနေ ဆုတ်ခွာပေးဖို့ ရာဇသံပေးခဲ့ ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ တိုက်ပွဲများ ခါတိုင်းထက်ပိုမို ပြင်းထန်လာပါတယ်။ အစိုးရတပ်တွေဟာ KIA စခန်းတွေကို တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်လာတဲ့ အထိ တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။
တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းဘဲ အစိုးရ တပ်ဘက်က လေကြောင်း ပစ်ကူတွေ အပါအဝင် တာဝေးပစ် ဟော်ဝစ်ဇာတွေ၊ လောင် ချာတွေ အသုံးပြုပြီးတော့ ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင် တပ်တွေကို ပစ်ကူပေးခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေမှာ အစိုးရဟာ KIO ဌာနချုပ်ကို ထိမ်းချုပ်နိုင်တဲ့ နေရာတွေကိုပါ ရယူလာနေပါတယ်။
KIO ကတော့ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးကြရင် လက်ရှိ ဖြစ်ပွား နေတဲ့စစ်ရေး ပြသနာတွေ အလိုလို ပြေလည်သွားလိမ့် မယ်လို့ပြောကြားချက်တွေ ရှိခဲ့ပေမဲ့ နိုဝင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့ ရွှေလီဆွေးနွေးမှာဘဲ ရပ်တန့်နေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကချင်ကို ဘာကြောင့် စစ်ဆင်ရေး လုပ်နေရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာဖြစ် နိုင်မလဲ ? ဒီစစ်ပွဲကိုဘယ်လို အဆုံးသတ်ကြမလဲ ? ဆိုတာ တွေကို ဒီတိုက်ပွဲကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ အခြေစိုက် စစ်ရေး အကဲ ခတ် ဦးအောင်ကျော်ဇောကို ရွှေဟင်္သာ သတင်းဌာနက မေးမြန်း ထားပါတယ်။
ဦးအောင်ကျော်ဇော (ဖြေ) - ဒါက လမ်းကြောင်းရှင်းဖို့ သူတို့ပြောပေမယ့် ဒါကအပေါ်ယံအကြောင်း ပြချက်ပါ၊ ဒါက အဓိကမဟုတ်ပါဘူး၊ လဂျားယန်က ကချင်တပ်တွေ ဆုတ်ပေးပါလို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ညှိနှိုင်းပြီး ဆုတ်ပေး စေချင်ရင် လည်း ကချင်ဖက်ကဆုတ်ပေးမယ့် အနေအထားမှာရှိပါတယ်၊ အခုသူတို့ဟာက ဒီဇင်ဘာ (၃၀) ရက်နေ့က လည်း ၇၇၁ စခန်းကို သိမ်းလိုက်တယ်။ အဲတာ KIA တပ်ရင်း ၂၃ ရဲ့ဌာနချုပ် စခန်းပါ။ အရင်တုန်းက အတူတူ နေခဲ့တဲ့နေ ရာလေ။ အဲဒီ ၇၇၁ စခန်းအောက်မှာ သူတို့ စခန်း တစ်ခု ရှိပါတယ်၊ အဲဒီ စခန်းလောက်အထိ သူတို့လာလို့ရပြီးသား ပါ။ ဒီတော့ ၇၇၁ ကို တက်တိုက်စရာ လိုလားဗျာ။ အခုဆို နောက်ဆုံး ဖွန်ဗျဉ်ဘွမ် (KIA တပ်ရင်း ၂၄ ဌာနချုပ်) စခန်း အထိတောင် တက်တိုက်လာတယ်။ ဒီတော့ ဒီစစ်ဆင်ရေးရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က လမ်းကြောင်းရှင်းဖို့ မဟုတ်နိုင် ဘူး လိုင်ဇာကို စစ်ရေး အရ ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ခြိမ်းခြောက်လို့ရတဲ့ ကုန်းမြင့်စခန်းတွေကို သူတို့လိုချင်လို့ပဲ။
အောင်ကျော်ဇော (ဖြေ) - ဓါတု လက်နက် ဆိုတာတော့ လက်နက်အကြီးတော့ မဟုတ်ဘူး၊ အဆင့်မြင့်တဲ့ အမျိုးအ စားတွေမဟုတ်ဘူး၊ ဓါတု လက်နက် အမျိုး အစား လို့ပြောရင် အကြုံးဝင်တဲ့ ရိုးရိုး တန်းတန်း သာမန် စစ်ပွဲတွေမှာ သုံး တဲ့ လက်နက် အချို့ကို သုံးတာ ရှိပါတယ်၊ အဲဒီကျည်ဆံတွေကနေ အငွေ့တွေ ထွက်ပြီး မူးဝေ အော့အန် တာလောက် အဲလိုမျိုး အပျော့စား သုံးတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေ ကလည်း ဓါတု လက်နက်လို့ ပြောရင် အကြုံးဝင်ပါတယ်။ Chemical Warfare လောက်ထိ သုံးတာမဟုတ်ပါဘူး။
အောင်ကျော်ဇော (ဖြေ) - စစ်ရေးဆိုတာ နိုင်ငံရေးရဲ့ အဆက်ပဲလေ၊ နိုင်ငံရေး အရဖြေရှင်း နိုင်ရင် စစ်ရေး အရ ဖြေ ရှင်းနိုင်မယ်၊ အမှန်ပြောရရင် ဒီလမ်းကြောင်းဟာ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ လမ်းကြောင်းပဲ ဖြစ်တယ်။ ကျွှန်တော်တို့ ပြောနေ တာ က နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးနိုင်မယ့် အခြေအနေ အချက်အလက်တွေကို ဖန်တီးနိုင်ရန် တပ်တွေကို ရပ်ထားလို့ရတယ်၊ လိုင်ဇာကို မသိမ်းဘူး၊ လမ်းကြောင်း စိုးမိုးရေး သက်သက်ပဲ ဆိုရင် ဘာလို့ တပ်မ ၈၈၊ ၂၂၊ ၃၃၊ ၁၀၁ ပါ ရောက်နေ တာလဲ ဒီလောက် တပ်အင်အား လိုပါသလား၊ တက်နေတာက အခုမှ တက်နေတာ မဟုတ်ဘူး မနှစ် ကတည်းက တက်ထိုးနေတာလေ၊ လဂျားယန်မှာ သူတို့တပ်တွေရှိတယ်၊ ရဟတ်ယာဉ်တွေလည်း ဆင်းလို့ရတယ်၊ သူတို့အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က လိုင်ဇာကို အထီးကျန် ဖြစ်အောင်၊ လိုင်ဇာက ကေအိုင်အိုရဲ့ စီးပွားရေး အဆောက် အအုံမြို့လေ၊ ဒီ တောင့်တင်းနေတဲ့ KIO လိုင်ဇာကို သူတို့က အားနည်းသွားအောင် Financial Blow လုပ်တာ၊ လိုင်ဇာကိုမသိမ်းဘူး၊ သိမ်းရင်သူတို့ နိုင်ငံရေး သိက္ခာကျတယ်။ အခု ၇၇၁ ကုန်းရတယ်၊ ဖွန်ဗျဉ်ဘွမ်ကို ရမယ်ဆိုရင် လိုင်ဇာကို မသိမ်းပေ မယ့် ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် စစ်ရေး အရ ထိန်းချုပ် ထားနိုင်ပြီလေ။
အောင်ကျော်ဇော (ဖြေ) - စစ်ပွဲက အချိန်တစ်ချိန်ရှိလာပြီဗျ၊ အမှန်ပြောရရင် ရပ်သင့် တယ်လို့ထင်ပါတယ်၊ အထူး သဖြင့် ထိုးစစ်ဆင်နေတာက ဗမာတပ်လေ၊ KIA က ခံစစ်ဆင်နေတဲ့ တပ်ကို၊ သူမရပ်ပဲ ဆက်ထိုးရင်တော့ ဒီ့ထက် ဆိုး ကျိုးတွေ အများကြီး မြင်ရမယ်။
တစ်အချက်က အမျိုး သားရေး ပြသနာကြီး ပေါ်လာတော့မယ်၊ ကချင်တွေရဲ့ ဗမာမုန်းတီးရေး စိတ်ဓါတ်တွေ ကိန်း အောင်းလာတော့မယ်၊ ဗမာတပ်က ရှေ့ကပြင်ထိုးနေတယ်ဆိုရင် သူတို့ နောက်တန်းတပ်တွေကို ကေအိုင်အေက ပြန် ထိုးလို့ရတယ်၊ ဝင်တိုက်ရမှာ၊ ဒါပေမယ့် အခု ကေအိုင်အေကမထိုးဘူး။ အဲလို မြို့ပေါ် တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်လာရင် အရပ် သားတွေ သေကြေမှု၊ ဒုက္ခ သည်တွေ အများကြီး ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/10/20130အကြံပြုခြင်း
လူကြီးသားသမီးများ၏ အမည်ခံလုပ်ကွက်များကို ခရိုနီများက ကူညီလုပ်ကိုင်မှုသည် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိ
မြန်မာ့ စီးပွားရေး သတင်းများ ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၃
ကျောက်စိမ်း ကျောက်မျက် လုပ်ကွက်များတွင် ယခင်အစိုးရလက်ထက် လူကြီးသားသမီးများ၏ အမည်ခံလုပ်ကွက်များကို ခရိုနီများက ကူညီလုပ်ကိုင်မှုသည် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိ
ကျောက်စိမ်း ကျောက်မျက် လုပ်ကွက်များတွင် ယခင်အစိုးရလက်ထက် လူကြီးများ၏ သားသမီးများ၏ အမည်ခံလုပ်ကွက်များကို ခရိုနီများမှ အကွက်ဝယ်ယူ ဦးဆောင်ကူညီ လုပ်ကိုင်ပေးမှုများသည် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်အထိ ရှိနေပြီး ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများ၏ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဆုံးရှုံးနေရကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေက ဇန်န၀ါရီလ ၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
''ကျောက်စိမ်း ကျောက်မျက် တင်ပို့ခြင်းကို အမေရိကန်အစိုးက ကန့်သတ်ထားတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ သူတို့ ပိတ်ပင် ကန့်သတ်ထားတဲ့သူတွေက ကျောက်မျက် ကျောက်စိမ်းအသင်းမှာ ပါဝင်နေလို့ ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။အရင် အစိုးရလက်ထက်က ခရိုနီတွေက ကျောက်မျက်အသင်းမှာ တာဝန်ယူထားတော့ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေ ဆုံးရှုံးနေရတဲ့အတွက် လွှဲပြောင်းပေးဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
ခရိုနီကြီးများ၏ အကူအညီနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေါ်စု သဘောထား ထုတ်ဖော်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြည်သူ့လွှတ်တော်၌ မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် NLD ၏ လူမှုရေးလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းများကို ပံ့ပိုးနေသည်ဟုဆိုသည့် ခရိုနီများနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်း၏ သဘောထားကို ထုတ်ဖော် ပြောကြားလိုက်သည်။ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့က ကျင်းပသည့် ဆဋ္ဌမအကြိမ် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ခတ္တနားနေချိန် မေးခွန်းကို NLD ဥက္ကဋ္ဌက ပြန်လည်ဖြေကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ခရိုနီလို့ ခေါ်ခံရတဲ့သူတွေက NLD နဲ့ တခြား လူမှုရေးလုပ်ငန်းလုပ်သူတွေကို ပံ့ပိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဘာဖြစ်လဲ ပံ့ပိုးပါစေပေါ့။ ပိုက်ဆံတွေကို တခြားနေရာမှာ အလဟဿ ဖြုန်းမယ့်အစား ပံ့ပိုးသင့်တဲ့ နေရာမှာ သုံးတယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲ” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောသည်။
NLD ၏ ရံပုံငွေပွဲအချို့နှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာပွဲများတွင် Air Bagan, Sky Net နှင့် AGD Bank တို့မှ အဓိက အလှူရှင်များအဖြစ် ပံ့ပိုးပေးသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် ဝေဖန်မှုများရှိနေချိန်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ခရိုနီအပေါ် ၎င်း၏ အမြင်ကို ယခုကဲ့သို့ ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“NLD ကို ချဉ်းကပ်လာတာလား၊ ဘယ်အဖွဲ့ကို ချဉ်းကပ်တာလားဆိုတာကို အန်တီ မကြည့်ဘူး။ လုပ်တာက ဘာအတွက် လုပ်တာလဲ ဘာကို ထောက်ပံ့တာလဲ၊ ဘယ်နေရာကို အကျိုးပြုသလဲ။ ပြည်သူကို အကျိုးပြုမယ်၊ ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရေးကို အကျိုးပြုမယ်၊ လိုအပ်နေတဲ့ ပညာရေး ကိစ္စတွေကို အကျိုးပြုမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ကြိုဆိုရမယ့် ကိစ္စပဲ” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆိုသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာက ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ရံပုံငွေပွဲတွင် လေလံတင်ရောင်းချသည့် ဂစ်တာတလက်ကို ရွှေသံလွှင်ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်သည့် Sky Net ရုပ်သံလိုင်းပိုင်ရှင် ဦးဝင်းနိုင် က ကျပ် ၅၈၈ သိန်းဖြင့်၊ မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်နှင့်အပြိုင် လေလံကြေးပေး၍ ဝယ်ယူခဲ့ပြီးနောက် NLD နှင့် ၈၈ စသည့် နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံမှုများ ရှိလာခဲ့ကြသည်။
ခရိုနီဆိုသည်မှာ ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက်များက ချမ်းသာလာပြီး တယောက်နှင့်တယောက် ချမ်းသာပုံချင်း မတူညီ၊ မတရားမှုများ လုပ်ခဲ့သလား၊ မလုပ်ဘူးလားဆိုသည်ကိုလည်း စိစစ်ရမည်၊ သို့သော် မည်သူပင်ဖြစ်စေ ပြစ်မှုမထင်ရှားသရွေ့ အပြစ်မဲ့ဟူ၍ သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ပြစ်မှုရှိသူများကိုလည်း ပြုပြင်ပိုင်ခွင့် ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ဆိုသည်။
“လူတယောက်ကို ကြည့်တဲ့အခါ လူတွေဟာ တခါဆိုးလို့ အမြဲတမ်းဆိုးနေမယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး” ဟုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုလိုက်ပြီး ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများတွင် သူဌေးဖြစ်နေသူများသည် ယခင်က စက်မှုတော်လှန်ရေးကာလက တရားမျှတသော နည်းလမ်းဖြင့် ဖြစ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေ ရှိခဲ့ကြောင်း၊နောက်ပိုင်းတွင် ပရိဟိတ လုပ်ငန်းများ လုပ်သည့် မိသားစုများ ဖြစ်လာကြောင်း ခရိုနီ သမိုင်းကြောင်းကို ရှင်းပြသေးသည်။
NLD ပါတီ ပညာရေး ကွန်ယက် နှစ်နှစ်ပြည့်၊ အခမဲ့ ပညာဒါန ကျောင်းများ ရံပုံငွေ ရှာဖွေရေး ဂီတပွဲတော်ကို ခရိုနီများဖြစ်ကြသည့် Sky Net ၊ Air Bagan နှင့် AGD Bank တို့မှ လုပ်ငန်းရှင်များက ငွေကျပ် သိန်း နှစ်ထောင်ကျော် လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။အဆိုပါရံပုံငွေပွဲမှ သိန်းပေါင်း ငါးထောင်ကျော် ရရှိခဲ့ပြီး စီစဉ်စရိတ် သိန်းနှစ်ထောင်ကျော်နှင့် ကျန်ငွေ အသားတင် သိန်း သုံးထောင်ကျော်ရှိသဖြင့် အဆိုပါငွေများကို နယ်စပ်ပညာရေးတွင် သုံးမည်ဟု NLD ပညာရေးကော်မတီက ဆိုသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး သံလျင်မြို့နယ်တွင် အကောင်အထည်ဖော်နေသော သီလဝါ အထူး စီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းသည် လာမည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် လုပ်ငန်းများ စတင် လည်ပတ်နိုင်မည်ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်(UMFCCI)တွင် ကျင်းပသည့် သီလဝါ စက်မှုဇုန် နှင့်ပတ်သက်သော ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွင် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်က စက်မှုဇုန်လုပ်ငန်းများ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စတင်လည်ပတ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆွေးနွေးပွဲ၌ UMFCCI ဥက္ကဌ ဦးဝင်းအောင်က “ထိရောက်မှု ရှိနိုင်မယ့် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်မယ်၊ လုပ်သားကိစ္စတွေ အပါအဝင် အားလုံးကို အကျိုးရှိအောင် လုပ်သွားမှာပါ”ဟု ပြောသည်။သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်း မြေနေရာများကို ဝယ်ယူရန်အတွက် လုပ်ငန်းရှင်များက စဉ်းစားကြသော်လည်း နိုင်ငံတကာ တွင် အကောင်အထည်ဖော်နေသော စီးပွားရေးဇုန်လုပ်ငန်း မြေနေရာများထက် အဆမတန် ဈေးမြင့်နေခြင်းကြောင့် သင့်လျော်သည့် နှုန်းထားဖြင့် လုပ်ကိုင်သွားနိုင်ရန် ညှိနှိုင်းနေကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဆက်လက်၍ ဦးဆက်အောင်က“နိုင်ငံတကာမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ဈေးထက် များနေတာကြောင့် အဲ့ဒီဈေးနဲ့တော့မသွားဘူး၊ သင့်တော်တဲ့နှုန်းနဲ့ပဲ သွားမယ်၊ လုပ်ငန်းရှင်တွေအရှုံးပေါ်အောင်တော့ လုပ်လို့မရဘူး”ဟု ပြောသည်။သီလဝါဇုန်အတွင်းရှိ မြန်မာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သီလဝါ ဆိပ်ကမ်း (MITT)တွင် ၁၆ နှစ်ကျော် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် အငြိမ်းစား အရာရှိတဦးကလည်း“အထူး စီးပွားရေးဇုန် လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ လမ်းတွေကောင်းဖို့ လိုတယ်၊ ရေ လိုအပ်ချက်တွေလည်း ရှိတယ်၊ လျှပ် စစ်မီး ရရှိဖို့လည်း လိုတယ်၊ သီလဝါမှာက အဲ့ဒီလိုအပ်ချက် တွေအများကြီး ရှိနေတယ်”ဟု ပြောပြသည်။
လက်ရှိအခြေအနေအရ အလုပ်သမား ပြဿနာများ ရှိနေ၍ ဖြေရှင်းနိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ထိုအခြေအနေများကြောင့် လုပ်ငန်းရှင် များ အနေဖြင့် စက်ရုံတည်ဆောက်အရေးအတွက် စဉ်းစားနေကြရကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်လာသည့် ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းရှင် တဦးဖြစ်သူ ဦးကျော်လင်း က ပြောဆိုသည်။သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းအတွက် Master plan ကို လာမည့် ဒီဇင်ဘာ လကုန် အပြီးရေးဆွဲမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာမှ ဥပဒေ ရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းနေကြောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးအတွက် ကော် မတီများ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် စီစဉ်နေကြောင်းလည်း သိရသည်။
“တပတ်ကို တကြိမ် လုပ်ခတွေ ရှင်းပေးခဲ့တယ်။ အခု လုပ်ခ ရှင်းမပေးတာ ၂၈ ရက်ရှိပြီ။ တခြား လုပ်စရာလည်း မရှိတော့ ဒီမှာပဲ ဆက် အလုပ်ဆင်းနေရတယ်။ တချို့ လစာမရလို့ ဆက်မလုပ်တော့ တာတွေလည်း ရှိတယ်” ဟု ကျောက်ဖြူ မြို့နယ် မလည်ကျွန်း ကျေးရွာရှိ ပိုက်လိုင်း တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွင် နေ့စားလုပ်နေသည့် ကိုခင်ရီက ပြောသည်။
နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အလုံးအရင်းနှင့် ၀င်ရောက်လာချိန်တွင် ဒေသခံများ၏ ပညာရေး အခြေအနေ နိမ့်ကျမှု၊ လုပ်ငန်း မကျွမ်းကျင်မှု၊ အရည်အသွေး မပြည့်မီမှုတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကြီးမားသော စိန်ခေါ်မှုများ ဖြစ်ကြောင်း ရွှေ သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း ဆန့်ကျင် လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးဝင်းအောင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (SME) များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် “အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဗဟိုကော်မတီ” နှင့် “အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ” တို့ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ပထမ ကော်မတီကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး ဒုတိယ ကော်မတီကို ဒု သမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။
မြန်မာ-အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆွေးနွေးပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့ လမ်းမတြော်မို့နယ် မင်းရဲကျော်စွာလမ်း UMFCCI အဆောက်အအုံ ပထမထပ် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲကို UMFCCI အသင်းဝင်များနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ ၀ါရှင်တန်ဒီစီမြို့ ကုန်သည်များအသင်းတို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံ စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများ တက်ရောက် ဆွေးနွေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး ကိစ္စရပ်များ၊ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ အပါဝင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်များ ပါဝင်မည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယင်း ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်လိုသူများ အနေဖြင့် UMFCCI နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးဌာနသို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား စာရင်းပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အာဆီယံ သတ္တုတွင်းအသင်းသို့ ဝင်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ သတ္တုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်ကို ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“အသင်းချုပ်မှာ သတ္တုထုတ်လုပ်သူတွေ သန့်စင်သူတွေ ရောင်းယ်သူတွေ သတ္တုနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ လုပ်ငန်း
အသီးသီးက လုပ်ငန်းရှင်ကုမ္ပဏီတွေ၊ ပညာရှင် အသင်းအဖွဲ့တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု အသင်းချုပ် ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီမှ ဦးစိုးမိုး က ပြောသည်။
ယင်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ သတ္တုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်၏ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ အတွင်းရေးမှူး၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များ၊ အလုပ်အမှုဆောင်များ ရွေးချယ်မှုကို နေပြည်တော်၊ သတ္တုတွင်း
ဝန်ကြီးဌာနရှိ သီရိရတနာခန်းမတွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
“ဝင်ရောက် ရွေးချယ်ခံမယ်ဆိုရင် သတ္တုလုပ်ငန်း လုပ်နေသူ၊ ပြည်ပနိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု၊ အသင်းအဖွဲ့ကို စိတ်ဝင်စားသူ စတဲ့ အနေအထားများ ရှိရန် လိုအပ်ပါမယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
အသင်းချုပ် ဖွဲ့စည်းပြီးပါက နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊ ခေတ်မီ စက်ယန္တာယားများ တင်သွင်းရေး၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၏ အခက်အခဲများကို ပူးပေါင်းဖြေရှင်းရန်၊ နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံများ ဖလှယ်ရန် ရည်ရွယ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“အာဆီယံ မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေ၊ အဲဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ နောက်မှာ ပါလာနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတွေ၊ အနောက် ဥရောပ နိုင်ငံတွေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ လာရင် မြန်မာနိုင်ငံ သတ္တုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းကို လာရောက်ဆက်သွယ် ဆွေးနွေးနိုင်အောင်
လို့ပါ၊ နိုင်ငံတကာမှာလည်း ဒီလို အသင်းတွေ ထားပြီး ဆက်သွယ်ကြရတာပါပဲ” ဟု ဦးစိုးမိုး က ပြောသည်။
လတ်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ သတ္တု၊ သတ္တုနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ရှိနေကြောင်း သိရှိရသည်။
ငွေ ၃သိန်း မတန်သည့် လူ့အသက် တစ်ချောင်း
Nay Min's photo.
၁.၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ညနေမှာ တစ်တန်းကျောင်းသားလေးက
လမ်းဘေးမှာ ကစားနေရင်း စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့လွှတ်ကျောင်းထားတဲ့ နွားအုပ်တစ်အုပ်ရောက်လာပြီး အထဲက နွားတစ်ကောင်က ကလေးငယ်ကို ကန်သွားခဲ့ပါတယ်။
ကလေးခမျာ လမ်းဘေးမှာပဲ လဲကျပီးသတိလစ်သွားတာခနခနပါပဲ။ လူကြီးတွေရောက်လာပီး နှာတွေမှုတ်မှ သတိပြန်လည်လာပြီး ဆေးခန်းသွား ပြခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဝန်က
ဘာမှမဖြစ်ဘူး ဆိုပြီ ဆေးနှစ်လုံးထိုးပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။
သေချာတာကတော့ သူတို့နှစ်ဦးစလုံး အပြစ်မကင်းကြပါဘူး။ ကြားထဲက အပြစ်မဲ့ကလေးငယ်ကတော့...သနားစရာဗျာ....
အင်း......ဆင်းရဲ့မှုကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ယိုးမယ်ဖွဲ့ အပြစ်တင်ရတော့မှာပေ့ါလေ။
ဆေးရုံကိုသွားစုံစမ်းတော့ သူတို့ ရင်ခွဲစစ်ဆေးပြီးသားမို့ ထပ်မစစ်ပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့။ (သူတို့က မှုခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ဆေးတဲ့ ပုံစံနဲ့စစ်ဆေးတာလား...သာမန်အလောင်းစစ်ဆေးနည်းနဲ့စစ်ဆေးတာလား..ဆိုတာလည်း ရေရာသေချာတဲ့အဖြေ မရခဲ့ပါဘူး)
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရဲစခန်းမှာ မနေ့က အမှုဖြစ်စဉ်တောင်မပြောရသေးဘူး စခန်းမှုးကဘာပြောလဲဆိုတော့ ...ကလေးမသေဆုံးခင် ကုတင်ပေါ်က လိမ့်ကျတယ်မလားတဲ့.....
စဥ်းစားကြည့်ပါ....သူပြောလိုက်တဲ့စကားအတိမ်အနက်က ဘယ်လိုဥိးတည်နေတယ်ဆိုတာ...ဆိုလိုတာ..ကလေးကပဲ ကုတင်ပေါ်ကပြုတ်ကျလို့ သေတဲ့ပုံစံမျိုး....
အကယ်ရွေ့နစ်နာသူဘက်က အမှန်တရား ရပ်တည်မှုမရှိ်လို့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို ကလေးမိဘနဲ့ အမှန်တရားမြတ်နိုးသူတွေက လုပ်ဆောင်ခဲ့ရင် မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ ထောက်ခံအားပေးကြမှာလား....လို့ မေးချင်ပါတယ်ဗျာ..
(၁).... ဆေးရုံကိုသွားစုံစမ်းတော့ သူတို့ ရင်ခွဲစစ်ဆေးပြီးသားမို့ ထပ်မစစ်ပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့။ (သူတို့က မှုခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ဆေးတဲ့ ပုံစံနဲ့စစ်ဆေးတာလား...သာမန်အလောင်းစစ်ဆေးနည်းနဲ့စစ်ဆေးတာလား..ဆိုတာလည်း ရေရာသေချာတဲ့အဖြေ မရခဲ့ပါဘူး) ကြားရတဲ့ သတင်းတွေကတော့ နွားရှင်က သူ့ကိုတရားစွဲလည်း ဂရုမစိုက်ပါဘူးတဲ့. အကြောင်းက ဆေးရုံအုပ်နဲ့သူ အပေးအယူတွေနဲ့ အလောင်းစစ်ဆေးတာတွေကို သေချာစီမံထားလို့ပါတဲ့.(ရပ်ကွက်ထဲက ကြားရတဲ့သတင်းပါ) သေချာဟုတ်မဟုတ်ကတော့ ဆေးစစ်ချက်အဖြေထွက်မှပဲ သိရမှာပေ့ါ။ အကယ်ရွေ့များ ဆေးစစ်ချက်အဖြေက နွားကန်ဒဏ်ရာကြောင့် သေဆုံးတာ မဟုတ်ဘူးလို့ သုံးသပ်ချက်များပါလာရင် နွားရှင်အပေါ် ကျနော်တို့ စွဲဆိုထားတဲ့ အမှုက အဟောသိကံ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရဲစခန်းမှာ မနေ့က အမှုဖြစ်စဉ်တောင်မပြောရသေးဘူး စခန်းမှုးကဘာပြောလဲဆိုတော့ ...ကလေးမသေဆုံးခင် ကုတင်ပေါ်က လိမ့်ကျတယ်မလားတဲ့..... စဥ်းစားကြည့်ပါ....သူပြောလိုက်တဲ့စကားအတိမ်အနက်က ဘယ်လိုဥိးတည်နေတယ်ဆိုတာ...ဆိုလိုတာ..ကလေးကပဲ ကုတင်ပေါ်ကပြုတ်ကျလို့ သေတဲ့ပုံစံမျိုး.... ထမင်းစားကြည့်တဲ့သူတိုင်း စဉ်းစားတတ်ပါတယ်..... ကျနော်စဉ်းစားကြည့်တာတစ်ခုရှိတယ်..ကလေးက ကုတင်ပေါ်ကပြုတ်ကျတာ ခေါင်းနဲ့လုံးဝမထိဘူး..ထိုင်လျှက်အနေအထားနဲ့ကျတာ။ ကုတင်ပေါ်ပြန်တင်တော့ နာတယ်ဆိုပြီး အော်ဟစ်ရင်း ဆုံးသွားတာပါ။ဒီတော့ စဉ်းစားမိတာက နွားကန်ခံရစဉ်က ရင်ညွန့်နံရိုးများ အကယ်ရွေ့ ကျိုးခဲ့ရင် သာမန်အခြေအနေမှာ မသိသာပေမယ့် ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ရှားမိရင် ကိုယ်တွင်း ကလီစာတွေကို ကျိုးတဲ့နံရိုးက ထိုးစိုက်မိပြီး သေဆုံးတတ်တယ်ဆိုတာ ကျနော်ကြားဖူး တွေ့ဖူးလို့ပါ. အခုကလေးလည်း ဒီလိုပဲလို့ကျနော် ထင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဆေးရုံမတက်ခင် ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်မှန်ကို အပြင်ဆရာဝန်က ကြည့်ဲပီး မေးရိုးကျိုးလို့ ချက်ချက်းဆေးရုံတက်ခိုင်းတာကို ရင်ခွဲစစ်တော့ မေးရိုးကို ခွဲစိတ်စစ်ထားတာ မတွေ့ရဘူး။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ. ကျနော်ကတော့ ဥပဒေဘောင်ထဲက အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးမှ နောက်ဆုံးအဆင့်ကို ရွေးစေချင်တယ်။ အကယ်ရွေ့နစ်နာသူဘက်က အမှန်တရား ရပ်တည်မှုမရှိ်လို့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို ကလေးမိဘနဲ့ အမှန်တရားမြတ်နိုးသူတွေက လုပ်ဆောင်ခဲ့ရင် မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ ထောက်ခံအားပေးကြမှာလား....
သြော် အဲဒါကြောင့် ဒေါ်စုက ပြောခဲ့တာ ထင်ပါတယ် စီးပွားရှာ ချင်ရင်
ဆရာဝန် မလုပ်နဲ့တဲ့ သြော် .............ငွေ ၃သိန်းတောင်
မတန်တဲ့ အသက် တစ်ချောင်းပါလား
လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက အမတ်များကို သတိပေး
ယနေ့ကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် ဆဌမ အကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များကို ခွင့်ပျက်ကွက်မှု မရှိစေရန် သတိပေး ပြောကြားလိုက်ကြောင်း နေပြည်တော် သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
ယခု သုံးလနီးပါးကြာ ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ဘဏ္ဍရေး ကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးရန် ရှိသောကြောင့် ယင်းသို့ သတိပေး ပြောကြားခြင်းဖြစ်ကြောင်း တက်ရောက်လာသည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောကြားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က ကျင်းပသော ပဉ္စမအကြိမ် အဆိုပါ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၆၈ ဦး ခွင့်ယူ ပျက်ကွက်ခဲ့ရာ အများဆုံးခွင့်ယူသည့် အမတ်ဦးရေ အဖြစ် စံချိန်တင်ခဲ့ကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဇန်န၀ါ ၁၀ ရက် ညနေ ၅ နာရီက နေပြည်တော်ရှိ မြတ်တော်ဝင် ဟိုတယ်မှာ အမေရီကန်နိုင်ငံ Open Society Foundation ရဲ.ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ ဂျော့ခ်ျဆိုးရော့စ်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ယခုအပတ်ထုတ် မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံးဦးသိန်းစိန်အလှည့်
ကမ္ဘာကျော် တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ယခုအပတ်ထုတ် မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံး ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့အတွေးအမြင်၊ ဘဝဖြတ်သန်းမှု၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနောက်ခံအကြောင်းရင်း၊ အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်၊ စိန်ခေါ်မှုများနဲ့ ဖြေရှင်းမည့်အာဂျင်ဒါများ စသည်တို့ကို HANNAH BEECH ကိုယ်တိုင် သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီး ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
HANNAH BEECH ဟာ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး မွေးဖွားရာ ကျုံကူးရွာကလေးကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခဲ့ပြီး ရှုထောင့်ပေါင်းစုံက ရေးသား ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
မဂ္ဂဇင်း ကာဗာမှာတေ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့ ဓါတ်ပုံနဲ့အတူ
President Thein Sein is trying to transformamilitary state into thriving democracy.
Can he succeed -and will Burma's generals let him? ဆိုပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်။
လူကြီးသားသမီးများ၏ အမည်ခံလုပ်ကွက်များကို ခရိုနီမျာ...
တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ယခုအပတ်ထုတ် မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံ...